ပိုင်ဖြိုးသု ကတော့ သူမကို မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို မထိန်းဘူးလို့ ဝေဖန်နေတဲ့ သူတွေကို ချက်ကျကျတုန့်ပြန်လိုက်ပြီ–။ – Shwe Ba
Homepage / Cele News / ပိုင်ဖြိုးသု ကတော့ သူမကို မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို မထိန်းဘူးလို့ ဝေဖန်နေတဲ့ သူတွေကို ချက်ကျကျတုန့်ပြန်လိုက်ပြီ--။
ပိုင်ဖြိုးသု ကတော့ သူမကို မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို မထိန်းဘူးလို့ ဝေဖန်နေတဲ့ သူတွေကို ချက်ကျကျတုန့်ပြန်လိုက်ပြီ–။
By Shwe TPosted on January 13, 2021
မင်းသမီး ပိုင်ဖြိုးသု ကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုအောင် ပရိသတ်ကြီး ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် ။ ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်သူ မင်းသမီး တစ်လက်ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ “မီ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရုံတင်ပြီးနောက် လက်ထပ်ခဲ့ကြတာပါ ။
အိမ်ထောင် ကျပြီးနောက်မှာလည်း အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်ကာ မနားခဲ့သူ ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ လတ်တလောမှာ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Body Shaming လုပ်ခံနေရတဲ့အပေါ် ဒီနေ့မှာ “ ဟိုလေ– အကြံတစ်ခုလောက်ရလို့– ” ညည်းနည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး—ဟဲဗီးကြီးဖြစ်နေပြီ ” လို့ပြောတဲ့ အကိုကြီးရယ်– ” ပိုင်ဖြိုးသုကြီ းဝတုတ်ပြဲကွဲနေတာပဲ ”လို့ပြောတဲ့ လူတချို့ရယ်– ” မင်းသမီးဖြစ်ပြီး ကိုယ်လုံးမထိန်းဘူး လင်ရတာနဲ့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကို လွှတ်ချလိုက်ရလား ဒါတောင်ကလေးမမွေးရသေးဘူး ”လို့ အားကြီးနဲ့ဝေဖန်တဲ့အစ်မကြီးရယ် ကို—– ” ပိုင်ဖြိုးသု ကသူ့ကိုယ် သူဝနေတယ်ဆိုပြီးဝိတ်ချပြနေတော့ ကျမကလဲသေပေးရမှာလား? ” လို့မေးနေတဲ့ အစ်မကြီးရယ်— ”
ဘယ်လောက်မှ မရှိတဲ့ကိုယ်လုံးကို အရမ်းဝနေပါပြီပြောပြီးအတန်းရှည်ယူနေတယ် ”လို့ဝေဖန်နေတဲ့ အစ်မကြီးရယ်နဲ့ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ပေးလိုက်မယ်လေ— (ဝတယ် Vs မဝဘူး) သူတို့ဖာသာ သူတို့ရှင်းကြပလေ့စေ— ဒေါ်သုလေး ကကြိုးဝိုင်းအပြင်ထွက်ထိုင်ပြီး စားချင်တာလေးစားလိုက် လမ်းလေးလျှောက်လိုက် နဲ့သာယာနေလိုက်မယ်လေ— ကောင်းဘူးလား?? ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်လာခဲ့ ပါတယ် ။
မတူညီတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ ပြောခံ ေဝဖန်ခံနေရတဲ့အပေါ် သုသုကတော့ အကောင်းဘက် ကအတွေးနဲ့ပဲ ပျော်ပျော်လေးနေတတ် သူပါပဲနော်–ပရိသတ်ကြီး ။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိ်ုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ် ။
SourceးPaing Phyoe Thu’s Facebook
မင္းသမီး ပိုင္ၿဖိဳးသု ကိုေတာ့ အထူးအေထြ မိတ္ဆက္ေပးစရာ မလိုေအာင္ ပရိသတ္ႀကီး ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္ ။ ပိုင္ၿဖိဳးသုကေတာ့ ဇာတ္႐ုပ္ကို ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္သူ မင္းသမီး တစ္လက္ျဖစ္ၿပီး ဒါရိုက္တာဏႀကီးနဲ႔ “မီ” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး ႐ုံတင္ၿပီးေနာက္ လက္ထပ္ခဲ့ၾကတာပါ ။
အိမ္ေထာင္ က်ၿပီးေနာက္မွာလည္း အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို လုပ္ကိုင္ကာ မနားခဲ့သူ ပိုင္ၿဖိဳးသုကေတာ့ လတ္တေလာမွာ သူမရဲ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Body Shaming လုပ္ခံေနရတဲ့အေပၚ ဒီေန႔မွာ “ ဟိုေလ– အႀကံတစ္ခုေလာက္ရလို႔– ” ညည္းနည္းတာႀကီးမဟုတ္ဘူး—ဟဲဗီးႀကီးျဖစ္ေနၿပီ ” လို႔ေျပာတဲ့ အကိုႀကီးရယ္– ” ပိုင္ၿဖိဳးသုႀကီ းဝတုတ္ျပဲကြဲေနတာပဲ ”လို႔ေျပာတဲ့ လူတခ်ိဳ႕ရယ္– ” မင္းသမီးျဖစ္ၿပီး ကိုယ္လုံးမထိန္းဘူး လင္ရတာနဲ႔ပဲကိုယ့္ကိုယ္ကို လႊတ္ခ်လိုက္ရလား ဒါေတာင္ကေလးမေမြးရေသးဘူး ”လို႔ အားႀကီးနဲ႔ေဝဖန္တဲ့အစ္မႀကီးရယ္ ကို—– ” ပိုင္ၿဖိဳးသု ကသူ႔ကိုယ္ သူဝေနတယ္ဆိုၿပီးဝိတ္ခ်ျပေနေတာ့ က်မကလဲေသေပးရမွာလား? ” လို႔ေမးေနတဲ့ အစ္မႀကီးရယ္— ”
ဘယ္ေလာက္မွ မရွိတဲ့ကိုယ္လုံးကို အရမ္းဝေနပါၿပီေျပာၿပီးအတန္းရွည္ယူေနတယ္ ”လို႔ေဝဖန္ေနတဲ့ အစ္မႀကီးရယ္နဲ႔ႀကိဳးဝိုင္းထဲမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေပးလိုက္မယ္ေလ— (ဝတယ္ Vs မဝဘူး) သူတို႔ဖာသာ သူတို႔ရွင္းၾကပေလ့ေစ— ေဒၚသုေလး ကႀကိဳးဝိုင္းအျပင္ထြက္ထိုင္ၿပီး စားခ်င္တာေလးစားလိုက္ လမ္းေလးေလၽွာက္လိုက္ နဲ႔သာယာေနလိုက္မယ္ေလ— ေကာင္းဘူးလား?? ” ဆိုၿပီး သူမရဲ့ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာတင္လာခဲ့ ပါတယ္ ။
မတူညီတဲ့ အျမင္ေတြနဲ႔ ေျပာခံ ေဝဖန္ခံေနရတဲ့အေပၚ သုသုကေတာ့ အေကာင္းဘက္ ကအေတြးနဲ႔ပဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေလးေနတတ္ သူပါပဲေနာ္–ပရိသတ္ႀကီး ။ ဖတ္ရႈ႔ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေပ်ာ္ရႊင္သာယာတဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိ္ုင္နိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပး လိုက္ပါတယ္ ။
Previous post အဆိုတော် ရဲလေး တစ်ယောက် ရည်းစား (၃)ယောက် တစ်ပြိုင်တည်းထားတော့မယ်တဲ့ –
Next post The Voice Myanmar ပြိုင်ပွဲဝင် အဆိုတော် ခင်ရတနာစိုး က မေမေ့အတွက် အဖိုးတန် ခရမ်းဆွဲစိန်နားကပ် ဝယ်ပြီး ကန်တော့လိုက်ပါပြီ–။